Ikhaya elonwabileyo / elonwabileyo kunye nentwana "yevintage"
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJo And Stewart
UJo And Stewart unezimvo eziyi-86 zezinye iindawo.
Libala amaxhala akho kule ndawo iphangaleleyo nepholileyo. Eli likhaya eline-ambience ethandekayo eyenziwe kwaye iphethwe sisibini esidala “esigxile kusapho”. Ukujonga ukusingatha ixesha elifutshane enyakeni njengoko behlala apha ngamaxesha athile. Banomdla wokwamkela abantu abanentlonipho nabazolileyo ngakwikhaya labo kunye nabamelwane babo ababathandayo .Libiyelwe kwaye kukho indawo yokubeka iimoto. Izilwanyana zasekhaya ezincinci kuphela (izinja ezinkulu nakweliphi na icala kunye nokuphepha ungquzulwano). Iintsapho zamkelekile, akutshaywa ngaphakathi/ iindibano ezingxolayo.
Eli likhaya elipholileyo elineyadi entle enkulu. Kukho iindawo zikamabonakude ze-x2 kwaye amagumbi okulala ama-3 aneebhedi ezimbini okanye ezi-queen. Amagumbi okuhlambela angama-X2 kunye nezindlu zangasese ezi-2.
Ingaphaya kwendlela ukusuka kumzila kaloliwe. Ayiphazamisi, ukuba nembono entle kweli lizwe . Oololiwe aba-2 ngosuku. Indawo isembindini kunye nemizuzu emi-5 yokuqhuba ukuya kwisitalato esikhulu - (eMaitland St) - kukho uhambo oluhle ecaleni komlambo waseNamoi ukusuka endlwini nokubuyela ezivenkileni. Kumnandi ukuhamba ekuseni.
Umbuki zindwendwe ngu- Jo And Stewart
UJo ufumaneka ngeminxeba kuphela kwaye unomntu oncedisana naye wasekuhlaleni ukuba unqwenela uncedo olungakumbi
UJo And Stewart yi-Superhost
Inombolo yomthetho: PID-STRA-43305